Hajo Andrianainarivelo:HANINDRY NY HVM ANY AMORON’I MANIA RAHAMPITSO -
AccueilRaharaham-pirenenaHajo Andrianainarivelo:HANINDRY NY HVM ANY AMORON’I MANIA RAHAMPITSO
27/12/2016 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Hanatanteraka kaongiresim-paritra any amin’ny faritra Amoron’i Mania ny antokon’i Hajo Andrianainarivelo rahampitso Alarobia. Ny hifaninana amin’ny faritra Matsiatra Ambony no tanjony amin’izany. Nibaribary mantsy ny fahombiazana azon’ny antoko HVM tany amin’io faritra Matsiatra Ambony io tamin’ny tapaky ny volana Desambra lasa teo, ka dia mba hitsapa vintana any amin’ny faritra Amoron’i Mania ihany koa ny antoko MMM an’ingahy Hajo. Olona miisa 1 000 no fantatra fa kasaina hanatrika io kaongiresim-paritry ny antoko MMM any Ambositra io. Mazava ho azy fa olona tsy maintsy homena tambiny fa tsy olona resy lahatra amin’ny foto-kevitry ny MMM akory. Ireo olona ireo avy eo no hatao fitaovana amin’ny alalan’ny fivoizina ny hetsika amin’ny alalan’ny haino aman-jery. Fanaovana politika mamohehitra, efa tsy nahomby sy nanimba ny firenena hatramin’izay.
Tsy mitsahatra ny mitady lalana hisongonana ireo namany araka izany, i Hajo Andrianainarivelo eo amin’ny fanaovana politika ao anatin’ny tontolon’ny fanoherana eto Madagasikara. Raha tsiahivina, dia niainga tao anatin’ilay vondrona sadasada nantsoina hoe Mitsangana ry Malagasy ny tantara. Nifanaiky mantsy ireo filohana antoko politika nivondrona tao anatin’io fikambanana io fa hanolotra kandida iraisana amin’ny fifidianana izay ho filoham-pirenena manaraka eo. Nahafantatra ingahy Hajo tamin’izany fotoana izany fa tsy ny tenany ilay ho kandida hiraisana, ka avy hatrany ny tenany dia niala tao anatin’io fikambanana io. Taorian’izay, dia nisintaka tao anatin’ny Vondrona Politika Malagasy Miara-Miainga “VP MMM” ingahy Hajo Andrianainarivelo, ary nilaza fa MMM ihany sisa ny antoko politika misy azy. Tao anatin’izany no nilazany tamin’ny fomba ofisialy fa ny tenany dia manohitra ny fitondrana. Izany hoe nomeny ny fita-bitro ihany koa ny vondrona MAPAR izay manana ny maro an’isa noho ny MMM teny amin’ny antenimieram-pirenena.
Ankehitriny, dia mitady lalana mafy ny ahazo ilay toeran’ny filoha lefitra faha-7 ao amin’ny antenimieram-pirenena i Hajo Andrianainarivelo. Tsy nisalasala anefa ireo solombavambahoaka lany tamin’ny anaran’ny antokony, fa zara raha manana solombavambahoaka miisa 2 sisa ity praiminisitra lefitra tamin’ny andron’ny Tetezamita ity. Efa niala taminy avokoa mantsy ny ankamaroan’ireo solombavambahoaka lany tamin’ny anaran’ny VPM MMM.